ဝက်စ်မင်စတာ နန်းတော် - ဝီကီပီးဒီးယား
ရှေ့တွင် ဝက်စ်မင်စတာ တံတားနှင့်အတူ သိမ်းမြစ်ကိုဖြတ်လျှက်တွေ့ရပုံ
51°29′57″N 00°07′29″W﻿ / ﻿51.49917°N 0.12472°W﻿ / 51.49917; -0.12472ကိုဩဒိနိတ်: 51°29′57″N 00°07′29″W﻿ / ﻿51.49917°N 0.12472°W﻿ / 51.49917; -0.12472
၁၁၂,၄၇၆ m2 (၁,၂၁၀,၆၈၀ sq ft)  (internal)
၁၀၁၆; ၁၀၀၆ နှစ် အကြာက (၁၀၁၆)
ထောင်မှန်ကျ ဂေါ့သစ်ဟန် ဖော်ထုတ်ခြင်းပုံစံ
တရားဝင်အမည်: Palace of Westminster, en:Westminster Abbey, and St Margaret's Church
စာရင်းဝင် အဆောက်အအုံ – Grade I
တရားဝင်အမည်: Houses of Parliament / The Palace of Westminster
ဝက်စ်မင်စတာ နန်းတော် (အင်္ဂလိပ်: the Palace of Westminster) သည် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ပါလီမန်၏ လွှတ်တော်နှစ်ခုဖြစ်သော အောက်လွှတ်တော်နှင့် အထက်လွှတ်တော် တို့ လွှတ်တော်ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ကြသောနေရာဖြစ်သည်။ ပါလီမန်လွှတ်တော် (Houses of Parliament) ဟူ၍လည်း သိရှိကြသည်။ နန်းတော်သည် အင်္ဂလန်၊ လန်ဒန်မြို့အလယ်၊ ဝက်စ်မင်စတာမြို့တော်ရှိ၊ သိမ်းမြစ် (အသံထွက်:/တဲမ်ဇ်/) မြောက်ဘက်ကမ်းပါးတွင်တည်ရှိသည်။
နန်းတော်အမည်သည် ဘေးအနီးက ဝက်စ်မင်စတာ ကျောင်းတိုက် (Westminster Abbey) အမည်မှဆင်းသက်လာ၍ ဤအမည်သည်ပင် ၁၈၃၄ မီးလောင်မပျက်စီးမီက အလယ်ခေတ် နန်းတော်ဟောင်း (သို့) ယခုလက်ရှိတည်ရှိနေသော နန်းတော်သစ် တစ်ခုခုကို ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ နန်းတော်ကို ထီးနန်ူပိုင်ဆိုင်မှုကို အကြောင်းခံ၍ ဗြိတိသျှဘုရင်/ဘုရင်မက ပိုင်ဆိုင်၍ အခမ်းအနားဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် တော်ဝင်မိသားစုနေထိုင်ရာနေရာအဖြစ် ဂုဏ်ဒြပ်ကို ထိန်းသိမ်းထားရှိသည်။ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်က ခန့်အပ်ထားသော ကော်မတီများက အဆောက်အအုံကို စီမံထိန်းကျောင်းကြ၍ အောက်လွှတ်တော်နှင့် အထက်လွှတ်တော် နာယကများဆီသို့ တင်ပြကြရသည်။
ပထမဆုံးနန်းတော်ကို ၁၁ ရာစုက ဤနေရာတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြပြီး ဝက်စ်မင်စတာသည် ၁၅၁၅ တော်ဝင်ခန်းဆောင်များ မီးမလောင်ခင်အထိ အင်္ဂလန်ဘုရင်တို့၏ မူလနန်းဆိုက်ရာဌာနေ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျန်သည့်အပိုင်းများသညါ ယူကေ ပါလီမန်အတွက် နေရာအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့ကာ ပါလီမန်သည် ဤနေရာ၌ ၁၃ ရာစုကပင် လွှတ်တော်များပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် ဝက်စ်မင်စတာ ခန်းမဆောင်နှင့် အနီးနေရာများသည် တော်ဝင်တရားရုံးများ၏ တည်နေရာလည်းဖြစ်ပြန်သည်။ ၁၈၃၄ တွင် ပို၍ကြီးမားသော မီးလောင်မှုကြီးက ပါလီမန်လွှတ်တော်နေရာများကို ဖျက်ဆီးခဲ့၍ အလယ်ခေတ်ကကျန်ရစ်သည့် အဆောက်အဦများမှာ ဝက်စ်မင်စတာ ခန်းမဆောင်၊ စိန့် စတီဗန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်များည(Cloisters)၊ စိန့် မယ်ရီ သီးသန့်ဝတ်ပြုရာကျောင်းတော် (chapel)၊ ဂျူဝယ် တာဝါတို့ ဖြစ်လေသည်။
နန်းတော်ရာပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် ချားလ်ဇ် ဘယ်ရီက ဂေါ့သစ်ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ဟန်ပုံစံဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့၍ ၁၄-၁၆ ရာစုနှစ်များက "ထောင့်မှန်ကျ ဂေါ့သစ်"မူဟန်များသည် ၎င်းကို စေစားနိုင်ခဲ့လေသည်။ နန်းတော်ဟောင်း၏ ကျန်ရှိအပိုင်းများကို (မတွဲဆက်သည့် ဂျူဝယ် တာဝါမှလွဲ၍) ယခုအစားထိုတည်ဆောက်သည့်၊ ပို၍ကြီးမားသော အဆောက်အအုံနှင့် ပေါင်းစပ်ခဲ့ကာ ကြမ်းခင်းအကျယ်အဝန်းသည် ၁၁၂,၄၇၆ m2 (၁,၂၁၀,၆၈၀ sq ft) ရှိ၍ အခန်းပေါင်း (၁,၁၀၀) ကို အချိုးညီညီဖြင့် ဘေးဖက်အမိုးမဲ့နေရာပတ်လည်တွင် ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားသည်။ နန်းတော်သစ်နေရာ၏ အကျယ်မှာ ၃.၂၄ ဟက်တာ (၈ ဧက) ဖြစ်ပြီး သိမ်းမြစ်မှ နေရာပြန်လည်ဖော်ယူထားကာ မြစ်နံဘေးတွင်ရှိပြီး မျက်နှာစာသည် ၃၀၀-မီတာ long (၉၈၀-ပေ) ဖြစ်၍ မြစ်အရှေ့မျက်နှာစာဟု ခေါ်တွင်ကြသည်။ ဩဂတ်စတပ်စ် ပျူးဂျင် (Augustus Pugin) သည် ဂေါ့သစ်ဗိသုကာဆိုင်ရာ ဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်၍ ဘယ်ရီကို ကူညီပြီး နန်းတော်အတွင်းပိုင်းကို ပုံစံရေးဆွဲပေးခဲ့သည်။ စတင်တည်ဆောက်မှုသည် ၁၈၄၀ တွင်ဖြစ်၍ နှစ် (၃၀) ကြာမြင့်ကာ နှောင့်နေးမှုပေါင်းများစွာ၊ ငွေကြေးရာထားချက်ထက်ကျော်လွန်မှုများစွာဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ကြရာ ထိုဗိသုကာပညာရှင်နှစ်ဦးစလုံး သေလွန်ခဲ့ကြသည်။ အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်မှုသည် နှစ်ဆယ်ရာစုအထဲထိတိုင် ပြတ်တောင်းသဘောဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြလေသည်။ ယင်းအချိန်မှစ၍ လန်ဒန်မြို့ လေထုညစ်ညမ်းခြင်ူကို တန်ပြန်ရန် အဓိကထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သည့်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်လည်း အကြီးအကျယ် ပြင်ဆင်ခဲ့ကြရာ ၁၉၄၁ ၌ အောက်လွှတ်တော်ခန်းမဆောင် ဗုံးထိမှန်ထားသည်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးဆုံချက်နေရာဖြစ်သော ဝက်စ်မင်စတာ နန်းတော်သည် ယူကေ ပါလီမန်၊ ယူကေ အစိုးရအဖွဲ့၊ ဝက်စ်မင်စတာစနစ်တို့၏ အစားထိုးစကားလုံး (ယူအက်စ်အစိုးရကို ဝါရှင်တန်ဟု ခေါ်သကဲ့သို့) ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဲလိဇဘက် မျှော်စင်(တာဝါ) ကို ၎င်းရှိအဓိကခေါင်းလောင်းဖြစ်သော ဘစ်ဘမ်း (Big Ben) အမည်ဖြင့် ရည်ညွှန်းကြလေ့ရှိပြီး လန်ဒန်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏ အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်လာကာ မြို့၏ ခရီးသွားလာရာနေရာ၊ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ၏ ပြယုဂ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်လာ၏ ။ ရုရှား ဇာဘုရင် နီကိုလပ် (၁) က "ကျောက်တုံးဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့် အိပ်မက်" ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ ဝက်စ်မင်စတာ နန်းတော်သည် ၁၉၇၀ မှစ၍ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (၁) စာရင်းသွင်းခံခဲ့ရပြီး ၁၉၈၇ မှစကာ ယူနက်စကို၏ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများထဲက တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့လေသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ Palace of Westminster: Factsheet။ Restoration and Renewal။ Houses of Parliament။ 14 September 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5August 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Planning (Application to the Houses of Parliament) Order 2006"။ Parliamentary Debates (Hansard)။ 682။ United Kingdom: House of Lords။ 17 May 2006။ col. 339။ The Palace of Westminster is therefore Crown land because it is land in which there isaCrown interest, in this case an interest belonging to Her Majesty in right of the Crown. Archived 11 May 2021 at the Wayback Machine.
↑ Historic England။ Details from listed building database (1226284)။ en:National Heritage List for England။
↑ Boyne၊ Harry (1981)။ The Houses of Parliament။ Larousse။ p. 23။ ISBN 978-0-88332-259-8။ 19 March 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Tsar Nicholas I of Russia called it un reve en pierre (a dream in stone), and that is the romantic impression it must have created upon many millions of sightseers.
↑ Helm၊ Toby။ "Parliament burned down 183 years ago. Only 24-hour patrols are stopping another fire" (in en-GB)၊ The Guardian၊ 14 January 2017။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝက်စ်မင်စတာ_နန်းတော်&oldid=730266" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၃:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။